🥇 ▷ Maxaa dhaca marka baabuur wadida aan wadin uu la kulmo robot-keena… ✅
Maxaa dhaca marka baabuur wadida aan wadin uu la kulmo robot-keena…
Wax yar uun ka hor kirismaska ​​sanadkii hore, Telia iyo Ericsson waxay shabakad tijaabo ah oo 5G ah ka fureen dhismaha jaamacadda Tallinn University of Technology. Kani waa shabakad joogto ah, oo loo sameeyay TalTech saynisyahano iyo xarumaha bilowga maxalliga ah si ay u tijaabiyaan codsiyada cusub ee u baahan teknolojiyadda jiilka dambe.
Tijaabaddiisii ​​ugu horreysay waxay ahayd inuu ka soo qulqulo fiidiyowga tooska ah ee 4K laga soo qaado suuqa Kirismaska ​​ee Tallinn, kaas oo Telia Estonia ay sheegtay in ay ahayd markii ugu horreysay ee si toos ah loo baahiyo telefishinka 4K ee gobolka.
In kasta oo ay qaadanayso wakhti in isticmaaleyaasha aaladda mobilada ee Estonia ay bilaabaan is-qoritaanka 5G, waxaa jira meelo kale oo teknolojiyaddan laga bilaabay in la isticmaalo.
Mashruuc xiiso leh oo hadda ay taageerayaan Shabakadda 5G ee Telia waa ISEAuto, oo ah gaadiidkii ugu horreeyay iskiis u madax bannaan oo laga dhiso Estonia. ISEAuto waa xero mile ee u dambaysa, oo ka gaaban oo ka gaaban ta ka yar Mini Cooper, inkasta oo ay hal mitir ka dheer tahay Mini.
Waxaa lagu tijaabinayaa dariiqa wadista gawaarida ee TalTech. Gawaaridan ayaa leh lix boos oo loogu talagalay rakaabka ama shandadaha, oo leh matoor weyn oo 47kW ah oo bixiya xawaareyn xawaareyn ah 10kph illaa 20kph (6mph ilaa 12mph).
Teknolojiyada loo isticmaalo inay si madaxbanaan u waddo waxaa ka mid ah Lidar, dareemayaasha ultrasonic, radarsyo gaagaaban, kamaradaha, unugyada cabirka inertia (IMUs), iyo tikniyoolajiyadda meelaynta GNSS-RTK.
Raivo Sell, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan TalTech isla markaana ka mid ah saynisyahannada sarsare ee ka dambeeya mashruucan, ayaa u sheegay ZDNet in bishaan ay kooxdu billaabeen wejiga xiga ee mashruuca, kaasoo ahaa in gaariga labaad uu noqdo mid iskiis u madax bannaan.
“Nooca cusub wuxuu noqon doonaa nooc sharciga ah oo leh nidaam la hagaajiyay. Tani waxay ka dhigan tahay in ISEAuto v2 uu ku wadi karo darawallada jawiga magaalada,” ayuu yidhi.
Muuqaal: Safarada cusub: Sidee gawaarida darawallada, baalasheegaha iyo diyaaradaha aan badnayn u beddelaan qorshayaasheena safarka (sheekada TechRepublic Cover sheeko) | kala soo bax PDF version
Wejigan soo socdaa sidoo kale wuxuu ku lug leeyahay baabuurta lagu tijaabiyo laguna caddeeyo wadamo kala duwan.
“Tusaale ahaan, waxaan weydiisanay wadayaasha wadooyinka Tallinn, Estonia iyo Helsinki, Finland, iyo sidoo kale duuliyayaal dambe oo kuyaal Latvia. Waxaan sidoo kale bilownay in aan la shaqeyno jaamacadda Florida Polytechnic University si aan uga hirgalinno tijaabooyin cusub iyo qaababka ansaxinta gawaaridayada si aan uga dhigno kuwo nabad ah oo ka badan lagu kalsoonaan karo.
In kasta oo ISEAuto ay dhowaan heli doonto fursad ay ku sahamiso wadiiqooyin cusub oo rakhiis ah meelo kala duwan oo adduunka ah, taasi micnaheedu maahan inay ka tegi doonto jawiga magaalada ee caqliga leh xeradda TalTech.
Marka lagu daro 5G iyo gawaarida ISEAuto, aagga imtixaanka waxaa ku qalabeysan calaamadaha taraafikada ee xariifka ah waxaana sidoo kale adeegsada qalabka casriga ah ee loo yaqaan “starship Technologies”, taasoo fursad qaali ah u siineysa saynisyahano iyo ganacsato si ay u tijaabiyaan xalka dhibaatooyinka imaan kara. mustaqbalka dhaw. Xaaladaha kala duwan ee taraafikada.
Muuqaal Sidee 5G u beddeli doontaa ganacsiga (Warbixinta Gaarka ah ee ZDNet) | Soo degso warbixinnada PDF (TechRepublic)
“Kiiska cusub ee tijaabada waxaa loo qorsheeyay dhammaadka Janaayo iyo Febraayo si loo tijaabiyo isgaarsiinta V2V iyo V2I. Kiiska ugu horreeya ee tijaabada ah wuxuu muujinayaa isgaarsiinta robotka ISEA iyo gudbinta, si loo oggolaado dhaqankiisa wadista ee isgoyska. Tani waxay u baahan tahay isgaarsiinta daahitaanka oo hooseysa, oo la dhaqdhaqaaqayo. oo leh 5G, “Sell ayaa yidhi.
“Daraasadda kiiska labaad waxay ku lug leedahay isla waqtiga dhabta ah ee Lidar iyo gelinta kaamirooyinka wareegaya daruuraha si loo sameeyo howsha waqtiga dhabta ah iyo falanqaynta ka warqabka xaaladaha ku saleysan daruuraha inta lagu jiro safarka.”
Mashruuca ISEAuto wuxuu biloowday Febraayo 2017, markii Väino Kaldoja, oo ah madaxa shirkadda Silberauto, mid ka mid ah shirkadaha baabuurta waaweyn ee Baltic, uu yimid jaamacadda oo uu u soo bandhigay dhowr mashruuc oo hal-abuurnimo qarniga TalTech.
Intii lagu gudajiray kulanka Raivo Sell, fikirka samaynta gawaarida iswada ayaa la ogolaaday. Mashruucu wuxuu si rasmi ah u bilaawday Bishii Juun 2017, halkaas oo shirkadaha iyo jaamacaduhu ku maalgeliyeen 50 boqolkiiba kharashka mashruuca.
“Mashruucu waa mid hammi leh: in la soo saaro baabuur si buuxda u shaqeynaya sanad gudihiis,” ayuu yiri Sell.
Koox arday ayaa loo sameeyay inay ka shaqeeyaan softiweer wadista baabuurta, tikniyoolajiyadda dareemayaasha, iyo elektiroonigga, halka injineerada Silberauto ay bilaabaan inay soo saaraan gawaarida gawaarida.
HALKAN: Tilmaanta Aqoonta ee IT-ga ee Isbedelka iyo Saamaynta Tiknolojiyadda 5G (PDF bilaash ah)
Ujeeddooyinka ugu weyn ee mashruucu waa in la horumariyo khibradaha la xiriira, looguna deeqo daraasado wax ku ool ah oo casri ah ardayda loona abuuro jawi magaalo caqli badan ku leh dhismaha jaamacadda. Hadafyadan ayaa la waafaqay, oo hadda hal mashruuc ayaa ku dhamaan kara inuu noqdo wax aad u weyn.
“Waxaan hadda diyaarinaynaa qorshe maaliyadeed iyo qorshe istaraatiijiyadeed oo loogu talagalay mustaqbalka mustaqbalka ISEAuto,” ayuu yiri Sell.
“Illaa iyo hadda waa qorshe ku saleysan mashruuc, waxaan u baahan nahay inaan dhisno istiraatiijiyad muddo-dheer ah. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa fikradda magaalooyin caqli badan oo ku yaal xerada TalTech iyo la-hawlgalayaashayada, mashruuca ISEAuto ayaa dib loo habeyn doonaa si loola kulmo yoolalka muddada-dheer iyo fursadaha ganacsi. ” .
Danaha caalamiga ah ayaa jira. Ka sokow helitaanka marti-qaadyada bandhigyo iyo bandhigyo kala geddisan oo ka dhacay waddammada Baltic iyo Waqooyiga, ISEAuto waxay heshay soo-jeedinno iskaashi oo kala duwan.
Sell ​​wuxuu yiri: “Mid kamid ah shuraakadayada mashruucan ayaa ah Estonian ABB, mashruucan ayaa sidoo kale xiiso kaheley madaxa ABB ee Switzerland,” ayuu yiri Sell.
“Waxaa nalagu casuumay inaan iskaashi la yeelanno mashaariicda kala duwan ee EU H2020 waxaan sidoo kale bilownay inaan la shaqeyno jaamacadaha Japan iyo Mareykanka iyo shirkadaha. Waxaan bilownay iskaashi cusub jaamacadda Florida Polytechnic University iyo Xarunta Innovation ee Gaadiidka Caalamiga ah ee Mareykanka. “.
Marka goormaynu arki karnaa ISEAuto wadis si madaxbanaan u wadaysa jidadka dadweynaha? Sida laga soo xigtay Sell, ugu dhakhsaha badan.
“Tallinn wuxuu ku dhawaaqi doonaa hindise darawallada gawaarida dhaadheer oo iyagu iskood u wadi kara halka aan kaqeyb qaadan doonno. Haddii aan guuleysanno, gawaaridayadu way istaagi doonaan dhamaadka sannadka 2019.”
Is dhexgalka ISEAuto iyo robotyada gudbinta ayaa la tijaabinayaa iyadoo la adeegsanayo isgaarsiinta hoos u dhaca hooseeya ee ay awoodsiinayso 5G.
Caymiska hore iyo tan la xidhiidha
Ericsson, Volvo waxay sameysay qandaraas shan sano ah oo loogu talagalay gawaarida iskuxiran
Ericsson waxay sheegtay in heshiiska Volvo uu hadda yahay kan ugu weyn ee gawaarida daruuriga ku xiran.
SK Telecom waxay tijaabineysaa gaari lagu kaxayn karo si uu ula wadaago gaari
Kaqeyb galayaasha tijaabada waxay xirteen taleefanno casri ah iyagoo wacaya gaari wadis la’aan si ay u qaadaan una wada safraan.
Sidee cagaf cagafyada madaxa banaan, sirdoonka macmal iyo beeraha saxda ah waxay naga badbaadinayaan dhibaatada cuntada ee soo socota
Ka qaybqaado tartan si laguu quudiyo 9 bilyan oo qof oo degganaan doona meeraha Dunida sannadka 2050. Fiiri sida John Deere iyo kuwa kaleba uga shaqeeyaan sidii ay u beddeli lahaayeen isla’egta kahor xilli dambe.
Taleefanka gacanta 5G: kuma uusan imaan qarax, laakiin waa la maqlay
Adeegyada xawaaraha sare ee 5G ayaa beddeli kara wax kasta, oo ay ku jiraan aaladda aan isticmaalno, laakiin aan weli la gaadhin.
Sheekada Gaari Naftaada: Sida 6da Gawaarida Mareykanka Mareykanka Gawaarida TechRepublic ayaa la qorsheynayaa
Tiknolojiyadda Gawaarida iskeed u taagan ayaa ah dhibaato ka soo baxda magaalooyin badan, in kabadan 50% waxay leeyihiin baabuurta aan wadista wadin, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Taksiga duulista leh ee shirkadda Boeing ayaa dhameystiraya duulimaadkeedii ugu horreeyay ee CNET
Safarka gabadhu wuxuu diiradda ku saaray qaadida iyo dejinta dhulka, laakiin weli waxaa jiray wax intaas ka sii badan.